१९ वर्षकी युवतीले फेसबुकलाइभमा आएर किन गरिनत आत्मा हत्या के थियो कारण ! «
Published : 10 July, 2020 2:24 pm
पछिल्लो समय नेपालमा पनि आत्म ह त्याको घटना ह्वात्तै बढेर गएको छ । केहिदिन अघि मात्र दाङमा एक जना महिलाले फेसबुकलाइभ आयर आफनो प्राण त्याग गरेकी अलिजा गौतम पछि नेपालमा त्यस्तै प्रकारका थप घटनाहरु घटेका छन। दाङ पछी काठमाडौं र केहिदिन अघि मात्रै अस्ति शनिबार चितवनमा पनि फेसबुकलाइभमा आएर अरकी युवतीले आफ्नो प्राण त्याग गरेकिछिन ।
यो के कारणले यस्तो घटना घट्यो भनेर बुझ्दै जादा ति युवतीको पहिले नै बिहे भएको र केहि वर्ष पछि डीभोर्स पनि भएको बुझिएको छ। त्यस्तै युवतीको आमाले छोरीको बारेमा थप कुराहरु बताएकी छिन। छोरीले सानु उमेरमा बिहे गरेको र पहिले देखि नै घर बाट बाहिर बस्दै आएकी बताएकी छिन।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० हाकिमचोकमा डेरा गरेर बस्दै आएकी थिईन भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार शनिबार राति करिब ९:४५ फेसबुकमा लाइभ गरी पंखामा झु ण्डिएर युवतीले आ त्मह त्या गरेकी थिईन ।
तीन जना साथीहरु संगै फ्याल्टमा बस्दै आएकी १९ वर्षकी युवतीले फेसबुकमै लाइभ गरेर आ त्मह त्या गरेकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाले बताए । साथीहरु बाहिर गएको समयमा फेसबुक लाइभ गरी आ त्मह त्या गरेको जानकारी दिए ।
घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भईरहेको थापाले बताए । युवतीको घर भने भरतपुर २४ मा रहेको छ।
भाग्य र शिशिरमाथी मुद्दा हाल्ने । महिलामाथी दुर्व्यवहार गर्न पाइन्छ ? ….(भिडियो सहित)
भाग्य र शिशिरमाथी मुद्दा हाल्ने । महिलामाथी दुर्व्यवहार गर्न